Kulan deg deg oo loogu yeeray hey’adaha dowladda si loogala xaajoodo dhalaanka keli socodka ah ee doonaya ineey is dilaan | Somaliska
Kulan deg deg oo loogu yeeray hey’adaha dowladda si loogala xaajoodo dhalaanka keli socodka ah ee doonaya ineey is dilaan
Hey’adda wakiilka ka ah carruurta ee Barnombudsmannen, ayaa kulan deg deg ah iskugu yeertay hey’adaha dowladda maalinta berito ah si ay kala xaajooda xaalaadda deg degta ah soo wajahay dhalanka keli socodka ah.Kuwaas oo wararku sheegayaan ineey qaarkood qorsheeynayaan ineey goob qura nafta iskaga wada qaadaan.
“Waxaan u aragnaa ineey tahay arrin halis ah” ayuu yiri xoghayaha hey’adda wakiil caruureedka Barnombudsmannen-ka Hans Reuterskiöld oo waramayey muuqaal baahiyaha Iswiidhan ee Svtnyheterna.
Warbixino qeylo dhaan ah oo ay hey’addu heshay ayey ku sheegtay in dhalaan keli socod ah oo ay xaaladoodu aad liidato islamarkaasina ay doonayaan ineey nafta is dhaafsiiyaan, hey’aduna u aragto xaalad adag. Berito oo arbaca ah ayaa lugu wadaa ineey kulan deg deg ah ay iskugu yimaadaan hey’adaha kala ah laanta socdaalka, saraakiil ka socota waaxda daryeelka iyo caafimaadka iyo xafiiska arrimaha bulshadda. Kuwaas oo ka xaajoonaya qeylo-dhaanta deg dega ah ay u soo gudbisay shabakadda Vi står inte ut (Dibadda ma taagnin) oo la xirriira xaaladaha caafimaad ee dhalaankaasi.
“Sababta shirkaan ayaa ah warbixinadda ay soo gudbisay shabakadda Vi står inte ute (Dibadda ma taagnin) ee ku saabsan dhalaanka keli socodka ah ee qorsheynaya ineey nafta si wada jir ah iskaga qaadaan, waxaana u aragnaa arrintaan halis, maxaa yeelay muddo sannaddo ah ayaan la kulanay in ka badan 6000 ( Lix kun) oo dhalaanka keli socodka ah, kuwaas oo cadaadis xoogani saaran yahay islamarkaasina leh astaamo ay ku qorsheynayaan ineey is dilaan” ayuu yiri Hans Reuterskiöld. Wakiilka u dooda dhalaanka keli socodka ah ayaa dhinaca kale sheegay ineey dhalinyarro reer Afgaanistaan ay muddo gaaban gudahood isku dayeen ineey is dilaan, halka qaar kalena ay talaabo ceynkaas ah ay horeey u sameeyeen. Dil ku fekeristaan dhalaanka keli socodka ah ayaa loo sababeeynayaa iyagoo loo diiday in sharciyada la siiyo qaarkoodna dalka laga musaafurinayo.
Si kastaaba ahaate kulankan deg dega ah ee ay hey’adaha dowladdu iskugu imanayaan maalinta berito ah ayaa ku soo beegmeeysa markii maalmo ka dib shabakadda Vi står inte ut (Dibadda ma taagnin) ay qeylo dhaan ka soo saartay dhalaanka keli socodka ah ee doonaya ineey is dilaan, islamarkaasina dowladdu biloowday ineey arruuriso xog iyo macluumaad la xirriira iyo siddii looga hortagi lahaa falalkaasi.
Halkaan ka akhri warbixintii hore
Video: Daawo xaalaada tahriibka badda